Ungazixhoma njani iikhabhathi zodonga
Faka iikhabhathi zodonga ngaphambi kokuba ufake iikhabhathi ezisisiseko ukuze ungasebenzi ngaphezulu kweekhabhathi ezisisiseko. Indawo evulekileyo yomgangatho ikuvumela, umncedisi wakho, kunye neleli yakho yokungena ufikeleleke ngokucacileyo. La manyathelo achaza ukufaka iikhabhathi ezifreyimweyo. Iikhabhathi ezingenachaphaza zifakwe ngendlela efanayo ngaphandle kwaxa zidibanisa iikhabhathi ezidibeneyo. Ukujoyina iikhabhathi ezingenasiphelo, sebenzisa izikrufu zokhuni ezimfutshane nje kubukhulu bamacala amabini ekhabhathi.
Lixesha lokuba ufake ikhabhinethi yokuqala yodonga:
Dlulisa indawo yokufundela ukusuka eludongeni ukuya ngaphakathi kwikhabhinethi nganye ngaphambi kokuba uyiphakamise; kunye nemingxunya yokugrumba kwizikere ezinyukayo.
Imingxunya yokucoceka, enobubanzi obufanayo njengesikrufu, qinisekisa ukuba ikhabhathi iya kutsalwa ibotshelelwe eludongeni ngentloko yesikere. Linganisa ngononophelo kwaye ulinganise kabini. Ukumba imingxunya kwiziporo ezixhonyiweyo ezingasentla nezisezantsi zeekhabhathi (iziqwenga ezibini ezithe tyaba zomthi ngapha nangapha nangaphezulu ngasemva kwikhabhathi).
Cwangcisa ikhabethe yokuqala yodonga kwilastrip kunye ne-1/4-intshi kude nomgama osetyenzisiweyo eludongeni; khusela umphezulu kunye nezantsi kwekhabethe eludongeni nge-3-intshi-ubude # 10 izikrufu zekhabinethi.
Nyusa izikrufu njengoko usiya, kodwa ungaziqinisi ngokupheleleyo. Uya kubuya mva emva kokuqiniswa kokugqibela kwazo zonke izikrufu emva kokuba iikhabhathi zilungelelanisiwe, zidityaniswe ngezikrufu kunye nemibhobho yamanzi.
Ukuba unomncedisi, yibambe ibambe indawo ngelixa uyikhusela ngezikrufu. Ukuba usebenza wedwa, sika ubude bamaplanga uze wenze inotshi emile okwe-V kwelinye icala. Sebenzisa ezi ziqwenga njengama-brace ngokubeka inotshi ngokuchasene nezantsi kwekhabhinethi kunye nokutshata amaplanga ukuze ubambe ikhabinethi endaweni yayo. Beka i-rag okanye isiqwenga sekhadibhodi ngaphezulu kwekhabinethi apho amaplanga angafakwanga aya kuya kukhusela ukugqitywa kwekhabinethi.
Beka ikhabhinethi yesibini kwileja ecaleni kwekhabhinethi efakiweyo. Yincamathisele ngezikrufu njengokuba wenza eyokuqala.
Joyina iikhabhathi ezimbini ezinamasango amabini, abekwe malunga ne-1/4 yomgama ukusuka phezulu nasezantsi.
Inaliti yeConvenia yeekati
Sebenzisa isikrufu somthi okanye izikhonkwane zebar ezimfutshane ezinemihlathi edibeneyo engazukuphazamisa iikhabhathi. Njengoko uqinisa uqinisa, qinisekisa ukuba ubuso, umphezulu, kunye nezantsi kwezi zakhelo zimbini zigungxule ngokugqibeleleyo.
Qhoboshela imingxunya yesakhelo ngobuso, iipikethi zokubala ukuze ii-screwheads zibe nokugungxula kunye okanye ngaphantsi komphezulu, kunye nemingxunya yokulinga kwikhabhinethi edibeneyo.
Beka imingxunya kwizikhundla zehenjisi ukuze xa iihenjisi zifakiwe, izikrufu ziya kufihlwa. Eyona ndlela ilula yokugrumba le mingxunya konke kube kanye, usebenzisa indibaniselwano yokudibanisa ehlengahlengisiweyo.
Shayela ii-screws ezomileyo ezi-1/4-intshi kumngxunya ngamnye kwaye ususe izibopho.
Ukuba imingxunya ayinakulinganiswa ngokufanelekileyo okanye ukuba uqhuba ngaphezulu kwezikrufu, zinokuphuma ngokulula. Sebenzisa iibits ezifanelekileyo kwaye uhlengahlengise iklatshi kwi-drill / driver yakho ukunciphisa umda we-torque.
Fakela iikhabhathi zodonga olushiyekileyo eludongeni ngendlela efanayo kwaye emva koko ususe ileja.
Ukuba isicwangciso sifuna umcu wokugcwalisa kwindawo ethile, uyibambe kwisakhelo sobuso kwaye uyiqhoboshele njengoko ubuya kudibanisa iikhabhathi ezimbini kunye.
Ukuqala ekoneni, cwangcisa iikhabhathi usebenzisa umgca wesalathiso kudonga olukufuphi kunye nenqanaba leenyawo ezimbini, kwaye ufake ii-shims njengoko kufuneka.
Faka i-shims ngasemva kwekhabinethi emazantsi okanye phezulu njengoko kubonisiwe de kube ikhabinethi ilungile kunye nomgama ofanelekileyo ukusuka kumgca wesalathiso. Buyela umva isikrufu sokufaka, faka i-shim de ikhabethe ibe yeplumb kwaye uqhube kwisikrufu. Xa zonke iikhabhathi zilungisiwe, cima i-shims.
Kwangokunjalo gqibezela ukufakwa kweekhabhathi kuqala kwiindonga ezidibeneyo kunye nolunye udonga.
Ukubamba umtya wokugcwalisa endaweni kunye nokumba imingxunya ye-intshi ye-3/16-intshi kwisakhelo sobuso bekhabhathi kunye nomtya wokugcwalisa, usebenzisa i-countersink bit ukukhupha intloko yesikere kwisakhelo sobuso. Khusela umtya nge-3-intshi ye-drywall screws.
duloxetine hcl dr 30mg ikepusi
Phinda ufake iingcango kwaye ujonge umsebenzi ngamnye ekusebenzeni kakuhle.
Lumka xa uhambisa kwakhona izikrufu kwiihenjisi. Izikulufu ngokubanzi zenziwe ngentsimbi ethambileyo, eyenza iintloko kube lula ukuzikhulula kwaye imiphini kulula ukuyicima.
Ihlala ixesha elingakanani i-suboxone emchameni
ukujonga njani iincukuthu
uziva njani nge strattera
ukuthatha i-tylenol ngelixa uncancisa
i-amoxicillin kunye ne-clavulanate potassium